Ireo andian-dahatsary fanentanana haingana - Shina Fast series series mpamatsy & Factory
Ny pig-pionina-jiro maharitra amin'ny sary izay afaka mandefa ny hazavana amin'ny alàlan'ny fidirana ny jiro hita maso maro ary azo ampiasaina imbetsaka. Ny singa dia tsy misy singa manjelanjelatra ary mety hiparitaka mihitsy aza ho toy ny additive eo amin'ireo mpiasa mangarahara toy ny takelaka, ranomainty, nandoko, ny plastika, ny cereal, ny vera, ny fibre hamelana ireo asan'ny mpandraharaha.
Ny pigment an'ny karazana dia maka ny lokony voajanahary ao amin'ny toerana mamirapiratra ary mamoaka jiro samihafa amin'ny haizina. Izy io dia azo ampiasaina ho an'ny jiro mipoitra, marika famantarana sy embelluction.
Radio mientanentana mora sy lafo vidy mahery vaika lava-pirosoana strontium alàlan'ny alàlan'ny famandrihana vita amin'ny alàlan'ny hamaritana ny marika toa ny manaraka ny lokony: ny mavo-maintso andian-tsarimihetsika Spect / code Luminance （mcd / m2） Fotoam-piraisan-davitra Min Particle (amin'ny um D50) diameter 1 Min 10 Min 60 Min Dmax (um) <RBG-60DJ101S 'RBG-601DJ101S 4000 650 65 8000 75 ~ 85 120 RBG-602DJ102S 3300 450 ...